Tsy nahomby ny fanamboarana Tree Connect (NT_STATUS_ACCESS_DENIED) avy amin'ny CUPS | Avy amin'ny Linux
Toy izao ny scenario: Ao amin'ny toeram-piasako misy a Domain Controller ho an'ny PC sasany mihazakazaka Windows. Ny iray amin'ireo PC ireo dia napetraka Windows 2000 ary ny tanjony tokana dia ny fizarana mpanonta Epson LX 300+ «Eny, sombin-tranom-bakoka.
Ny tiana holazaina dia hoe mila ireo mpanjifa mampiasa aho Ubuntu 12.04 afaka mampiasa ny mpanonta amin'ny tambajotra.
Manokatra ny wizard fanovana mpanonta (system-config-printer) aho ary manamboatra mpanonta iray amin'ny tambajotra.
Ampidiriko ny IP an'ny PC izay mizara ny mpanonta, omeko azy ny Fikarohana ary tonga lafatra, hitany ny Printer.
Avy eo mangataka ahy hampiasa mpamily izy, ka mitady Epson aho, avy eo mitady LX 300+.
Ary vonona. Raha vantany vao voalamina ny mpanonta, dia hanonta pejy fanandramana aho rehefa misy lesoka kely mahafinaritra tampoka.
Tsy nahomby ny fifandraisana hazo (NT_STATUS_ACCESS_DENIED)
Tsara hoy aho, hikarohana Internet ... ka ny fitetezana etsy sy eroa no sendra ahy ny vahaolana. Ho an'ity ohatra ity dia hampiasaiko ho Domain: DESDELINUX, ary toy ny solonanarana sy teny miafina: elav y avy amin'ny linux tsirairay avy.
Ny mpampiasa elav dia manana tombony amin'ny fitantanana amin'ny Windows PC. Tsy nizaha toetra tamin'ny mpampiasa mahazatra aho
Manitsy ny fisie izahay /etc/samba/smb.conf:
# Ovaoo ity ho an'ny workgroup / NT-domain anarana ny mpizara Samba anao dia ampahany amin'ny workgroup = WORKGROUP
Ary avelantsika toy izao manaraka izao:
# Ovaoo ity ho an'ny workgroup / NT-domain names ny Samba mpizara anao dia ampahany amin'ny workgroup = DESDELINUX
Avy eo manitsy ny rakitra izahay /etc/cups/printers.conf, izay ny tahirin-tsoratry ny mpanonta izay namboarinay dia heverina ho voatahiry. Izahay dia mitady ilay andalana milaza hoe:
Mamerina CUPS izahay
Ary vonona. Efa afaka manonta isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Nahitsy ny lesoka CUPS Tree connect (NT_STATUS_ACCESS_DENIED)
Misaotra betsaka anao, mandeha tsara izy io, mazava ho azy fa nataoko tao amin'ny Opensuse, mitovy tanteraka ny fandaminana, lavitra tsy hanjavona ireo teboka matotra, raha mbola misy orinasa manefa faktiora 2 na in-3 isam-bolana, hatramin'ny elektronika Ny faktiora dia sarotra be amin'ny vidiny mifandraika amin'ny sanda ampiasain'izy ireo.
Miarahaba anao ary misaotra noho ny tendro.
Faly aho fa nanompo anao 😀
Ireo mpanonta dot matrix dia tsy maintsy ho ny tsara indrindra any Kiobà, tsy mila ranomainty izy ireo, maharitra mandrakizay ny kofehy.
Haha tsy fantatrao na inona na inona, ary rehefa lany ny kasety dia mampiasa taratasy karbôna izahay ..
Fototra lehibe hianarana ny syntax smbclient hianaranao ny fomba fanoratana URI sy ny famahana ny olana amin'ny Samba. Manoro hevitra anao aho hamaky ny boky manontolo.
Ny olanao dia ny hoe raha tsy mamaritra ny mpampiasa ao amin'ny URI ianao dia manandrana miditra ho vahiny (na vahiny) tsy misy teny miafina, ary amin'ny sehatra iray dia saika tsy azo atao izany. Ahoana raha toa aho ka manoro hevitra ny PC izay mampiantrano ny mpanonta printy hamorona mpampiasa manana tombon-tsoa ho an'ny mpanonta ihany satria ny fampiasana ny angon-drakitra ho an'ny mpanontam-pirinty fotsiny dia tandindomin-doza lehibe (eritrereto ohatra fa afaka mamaky ny rakitra mpanonta.conf sy mazotoa mahazo solonanarana sy tenimiafin'ny mpandrindra sehatra)
Misaotra amin'ny tendron'ny eVeR. 😉
Fa maninona ianao no manova ny anarana workgroup amin'ny milina Ubuntu? Izany ve no anarana anananao amin'ny solo-sainao Windows?
Satria miditra amin'ny tambajotra iray fehezin'ny sehatra iray aho. Raha mamela an'i WORKGROUP aho dia tsy mandeha ilay mpampiasa ampiarahiko amin'ny mpanonta.
Raha mahita an'ity fanamarihana ity aho, izay tena ilaina tokoa, ary mampifandray ny fanontaniana amin'ny fampiasana samba, dia mizaha toetra an'i Manjaro aho. Fitsinjarana tena tsara izy io, fa raha ny samba kosa dia tonga izy io nefa tsy misy ny fanamboarana mialoha izay ananan'ny ubuntu, mint ary derivatives.
Somary sarotra ny olan'ny fizarana lahatahiry, mpanonta ary fitaovana ao anaty vondrona asa iray. Raha misy fampianarana, na olona iray izay namaha ity olana ity, hamoaka azy, dia omena lanja lehibe izany.
Ny variants notsapaiko dia ny kanelina manjaro sy ny KDE.
Nametraka ny mpanontaire xerox phaser 3140 aho ary nizara izany tamina tambazotra misy windows fa rehefa manonta ohatra 3 kopia dia manao pirinty taratasy iray na tsy mivoaka ny kopia sasany izao dia tsy haiko raha ho olan'ny mpamily izay heverina fa manana mifanentana amin'ny linux na olana eo amin'ny serivisy kaopy. Ity lesoka na bug ity dia mitranga ao amin'ny chakra toy ny amin'ny linux mint 14.
Rodrigo Sosa dia hoy izy:
Ry malala, misaotra betsaka anao nanokana fotoana hamahana ity olana ity. Ny marina dia nandeha nitety Internet nandritra ny antsasaky ny andro aho. Misaotra anao. voavaha
Valiny tamin'i Rodrigo Sosa
Ry Elav malalako, nanandrana nanao pirinty tamin'ny HP LJ 1000 tao amin'ny Ubuntu 12.04 aho, hitako ny fanampiana be dia be hita tao amin'ny WEB ary tsy nahavita na inona na inona aho, anisan'izany ny hita tao amin'ilay lahatsoratra navoaka tato amin'ity tranonkala ity tsy ela lasa teo momba ny CUPS, Azonao omena tanana ve aho? Efa tena kivy aho ary izaho irery no ao amin'ny sampan-draharaha mampiasa Linux te-hampiseho fa miaraka amin'ity rafitra ity dia tratra ny zavatra tsy mitovy amin'ny Windows, alaivo an-tsaina hoe tsy manana fanohanana ny Windows 7 sy 8 ity mpanonta ity, ka olana amin'ny voninahitra ho an'ny Linux dia manaporofo fa mahavita izany. Inona ny hevitrao?
Graciaaaaaaaas, vita tamin'ny Deskjet 710c ihany aho tamin'ny farany! Nandalo ianao.
Nahomby, misaotra betsaka.
Misaotra betsaka tamin'ilay lahatsoratra, io mihitsy no notadiaviko ary noho ny vahaolana azonao dia nanangana ny mpanonta avy hatrany izahay. Ny olona mandany fotoana hanoratana an'ity karazana lahatsoratra teknika ity dia manao an'ity tontolon'ny rindrambaiko maimaim-poana ity ho mora azo isan'andro ho an'ireo andrim-panjakana sy ny besinimaro.
Fandraisana anjara tena tsara ary niasa ho ahy izy io fa ho an'ny fanontaniana RAHA tsy afaka mitahiry ny teny miafina amin'ny lahatsoratra tsotra aho, misy vahaolana hafa ve amin'ity olana ity ???
Valiny tamin'i Osmel
Antonio Sanchez dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, saingy manana fanontaniana aho ... manan-kery ho an'ny windows 10 ?. Izany hoe, manandrana manao toy izany koa aho fa miaraka amin'ny mpanonta izay mifandray amin'ny windows 10 pc ary mangataka fanamarinana foana izy. Na dia miditra ny solonanarana sy ny teny miafina isaky ny mandeha aza aho dia tsy manaiky azy velively ary tsy manonta
Valiny tamin'i Antonio Sánchez
2013 sy ny asa mifandraika amin'ny Linux